Kitapo fisakafoanana an-tsokosoko azo ampiasaina any Chine vita amin'ny lamba canvas miaraka amin'ny foil aluminium, Sakafo atoandro Tote ho an'ny vehivavy, lehilahy, sekoly, fanamboarana birao ary orinasa | New Hunter
Kitapo Music Instrument
Kitapom-batsy antony / Travel
Kitapo Sling / Kitapo Messenger
kitapo mpitondra hafatra
kitapo tsy misy rano
Kitapo mihinana sakafo atoandro azo alaina azo ampiasaina amin'ny lamba canvas miaraka amin'ny foil aluminium, Sakafo atoandro Tote ho an'ny vehivavy, lehilahy, sekoly, birao
Kaody momba ny vokatra: HT46011
Size (mm): 211 * 165 * 266mm
Loko: Izay loko pantone
Vidin'ny FOB: 2,10 $- $ 2,40
Ora nanomezana: Manodidina ny 40-60 andro
Toerana fandefasana: FUJIAN, CHINA
Toerana niandohana: FUJIAN, CHINA
MATERIALY: Ny foam voahosotra EPE anaty fo matevina + foil aluminium dia afaka mitazona ny sakafonao ho mafana / hatsiaka / vaovao mandritra ny ora maro, tsy tantera-drano, mora diovina BPA maimaim-poana. Izahay dia manamboatra ny velirano Velcro taloha ho faribolana rehetra ary manome tadivavarana Velcro hahamety kokoa azy.
SAFE & azo antoka: ity kitapo fisakafoanana ity dia azo antoka ara-tsakafo, tsy manapoizina 100%, porofo mando, mahatohitra mahery vaika ary manohitra ny fanimbazimbana, izay manome anao fampiasana maharitra. Ankoatr'izay, natao amina paosy anatiny hametrahana lakile, telefaona, karatra na poketrao.
FAHASALAMANA Lehibe: refy: 8.3Lx6.5Wx10.5H santimetatra, miaraka amina famahana lava kokoa. Ity tavy fisakafoanana atoandro ity dia tsara ho an'ny famonosana sakafo be dia be, na dia mety misy ny sakafo tontolo andro ilainao aza, mety amin'ny asa, amin'ny fampiasana ivelany sy isan'andro.
MULTIFUNCTIONAL: Ity kitapo italy canvas azo ampiasaina ity dia manome vahaolana manintona sy maivana amin'ny filan'ny fitehirizana maro. Fomba lamaody entina misakafo, sakafo maivana, zava-pisotro, zava-pisotro ho an'ny vehivavy, lehilahy sy ankizy, na hampiasa azy io fotsiny ho toy ny kitapom-bola.
-Ny arofanina insulated aliminioma maharitra izay mora diovina ary afaka BPA.
-Extra matevina insulate form EPE mitazona ny sakafo ho madio sy vaovao.
-Mba mitazona tavoahangy rano, kaontenera iray na roa miampy voankazo vitsivitsy.
-Natao am-paosy fitehirizana anaty noho ny fametrahana ny karatrao, telefaona, poketra ary fanalahidy.
Tote Bag tsy misy fampiasa
-Ny fomba lamaody hitondra sakafo, tsakitsaky, zava-pisotro, zava-pisotro, ary fanomezana tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe, vehivavy, lehilahy, tovovavy ary zazalahy!
-Mamora ny fandaminana ny sakafonao ary ampamirapirato ny fiainanao salama isan'andro manomboka izao.
-Tololotra amin'ny fomba mirindra, ny kitapo fisakafoanana HOMESPON dia natao ho tote VERSATILE TSY MAINTSY MANANA.
-Materialy: firakotra vita amin'ny landihazo sy alimika
-Size: 8.3Lx6.5Wx10.5H santimetatra
-Ny fehin-kibo vita amin'ny landihazo roa malalaka dia mamela ny kitapo ho entina amin'ny sandry na eny an-tanana, ho afaka manangona sy mitondra sakafo atoandro mahasalama foana ianao amin'izay alehanao.
Teo aloha: Kitapo tenisy lehibe ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy mitazona fonosana tenisy, sakana pickleball, rakotra badminton, hazakaza-boady, baolina ary kojakoja hafa
Manaraka: Kitapo fanatanjahan-tena ivelan'ny trano kitapo 3P Taktika miaramila ho an'ny fitsangantsanganana amin'ny fitsangatsanganana an-tanety mitafy tantera-drano fanoherana nylon nylon Bag
Kitapo fisakafoanana antoandro ho an'ny ankizy lahy sy vavy, Lu ...
Kitapo fisakafoanana antoandro tany am-boalohany - ...
Kitapo fisakafoanana antoandro ato anaty kitapo misy sakafo tsy azo hanina ...
Kitapo fisakafoanana azo ampiasaina indray miaraka amin'ny soroka azo esorina ...
Kitapo fisakafoanana atoandro lehibe mitaingina boaty fisakafoanana malefaka ...
Boaty fisakafoanana antoandro Premium, kitapo fisakafoanana mihombo ho an'ny lehilahy ...
Làlana Yingbin Atsinanana, Faritra Indostrialy Chengnan, Country Hui'an, Quanzhou, Fujian, Sina
Telefaona: 86-595-87351963, 86 (0) 18876215427